Uthando lwe-Aries luyahambelana - Ukuhambelana
Eyona Ukuhambelana Uthando lwe-Aries luyahambelana
Abathandi be-Aries kuthiwa bahambelana kakhulu nabemi beLibra kwaye ubuncinci bayahambelana nabantu abazalelwe ePisces. Ukuba luphawu lomlilo oluhambelana nomqondiso we-zodiac kukwaphenjelelwa bubudlelwane phakathi kwezinto ezine zodiac: Umlilo, uMhlaba, umoya kunye naManzi.
loluphi uphawu lwe-zodiac ngoJulayi 1
Abo bazalwe kwii-Aries babonisa ukungafani okwahlukileyo xa benxibelelana nolunye uphawu lweempawu ze-zodiac kunye nabo. Nganye yezi zinto zidityanisiweyo zibangela ukuxoxwa ngokwahlukeneyo.
Kule tekisi ilandelayo iya kuchaza ngokufutshane konke okuhambelana phakathi kwe-Aries kunye neminye imiqondiso ye-zodiac.
Ukuhambelana kweAries kunye neeAries
Le miqondiso mibini yomlilo ngumdlalo onokuhamba nangayiphi na indlela! Ngamanye amaxesha ubuntu bakho obuntamo-lukhuni buza kwisivumelwano kwaye izinto zihamba kakuhle, ngelinye ixesha nesona sigqibo sincinci kufuneka usenze esona sinzima ehlabathini.
Ukuhambelana kweAries kunye neTaurus
Ukuhambelana kweAries kunye neGemini
Ukuhambelana kweAries kunye neCancer
Olu phawu lomlilo kunye nolu phawu lwamanzi lolunye loludibaniso olunamandla. Banokonwaba kunye kodwa kufuneka bakhumbule ukuba bahlala behamba kumacala ahlukeneyo.
I-Aries kufuneka ifunde ukuba novakalelo kunye nokhathalelo kuba yile nto ifunwa ngumhlaza. Ngakolunye uhlangothi iCancer kufuneka iqale ukulungelelanisa kwaye iguquke ngakumbi xa ifika kwiminqweno yeAries. Ngokumalunga nezothando, bobabini bayamnkela kwaye banokwenyama ukuya kwinqanaba elithile.
Ukuhambelana kweAries kunye noLeo
Le miqondiso mibini yomlilo ngumdlalo oqinileyo, omnye uthatha isigqibo kwaye omnye ulawula. Nje ukuba bobabini bafunde apho kufuneka balalanise impumelelo ayizukulinda.
Ezi zimbini zenza isibini esikhazimlayo nesiqhumayo, umzuzu omnye uncoma omnye nomnye, ukuphikisana okulandelayo. Iinkokheli ezimbini ezinomdla ngokudibeneyo ziqala iiprojekthi ezintsha nezinomdla nokuba zezokuthandana okanye zobungcali.
Ukuhambelana kweAries kunye neVirgo
Lo mqondiso womlilo kunye nophawu lomhlaba ngumdlalo ongenakwenzeka! Umlilo kunye nomhlaba zihlala zivelisa udaka kodwa kule meko intaba-mlilo kudala icinyiwe.
Zizinto ezichaseneyo, uVirgo ongumququzeleli ozelwe kakuhle kwaye othembekileyo kumaqabane akanakho ukwamkela ubuntwana kunye neenkani zeAries ezingakhathaliyo ezingazimiselanga kuzinikela kwangoko.
pluto kwindlu yesi-8 yendalo
Iinkwenkwezi zichongelwe ngokufanelekileyo ngenxa yokuba ii-Aries ezinamandla bezingenakuhlala ixesha elide kufutshane neVirgo ezolileyo nenomdla.
Ukuhambelana kweAries kunye neLibra
Olu phawu lomlilo kunye nolu phawu lomoya ngumdlalo onokuhamba nangayiphi na indlela! Ngokwendalo bayatsala kwaye bayaphelelisana njengethoni yeLibra echukumisayo yeeAries ezivuthayo kodwa ngamanye amaxesha izinto ziyaqhuma kwaye akukho nto umntu anokuyenza.
Nokuba olona luLibra lunyamezeleyo luyakucaphuka xa iAries eneenkani ityhila ukungavumi kwakhe ukulalanisa. Olu lwalamano ludinga ukuba bobabini basebenze ukuze baxhase amadangatye ngaphakathi.
Ukuhambelana kweAries kunye neScorpio
Olu phawu lomlilo kunye nolu phawu lwamanzi luyindibaniselwano enomdla enomphunga njengoko kunesaqhwithi. Bobabini abakulungelanga ukunikezela kunye nokulalanisa.
Banokwabelana ngamaxesha amangalisayo kunye kwaye banegalelo kwimpilo yomnye nomnye kodwa oku kuza nexabiso lomzabalazo oqhubekayo wokugcina izinto ezilinganisweni.
Obu budlelwane bukhula phantsi kweendlela zokuziphatha ezinamandla ezivela kumacala omabini.
Ukuhambelana kweAries kunye neSagittarius
Ukuhambelana kweAries kunye neCapricorn
Olu phawu lomlilo kunye nolu phawu lomhlaba ngumdlalo ongaqhelekanga! I-Aries ezivuthayo akunakulindeleka ukuba zinikezele kwiCapricorn esebenzayo ngenxa yoko kunqabile ukuba zifike ekuqondeni nakwezona zinto zincinci.
Banomdla kwaye bayakhathala kodwa oku akonelanga ixesha elide. I-Capricorn iyacotha kwaye iyacokiseka kwaye i-Aries engxamisekileyo kungenzeka ukuba kudala yahamba phambi kokuba uCapricorn agqibe ukubhengeza.
Ukuhambelana kweAries kunye neAquarius
Olu phawu lomlilo kunye nolu phawu lomoya ngumdlalo olula! U-Aquarius unayo yonke into ayifunayo ukuvutha amadangatye ee-Aries ngamaxesha afanelekileyo ngelixa ii-Aries zisazi ngqo ukuba zibeka nini amandla ku-Aquarius ezolileyo nebaliweyo.
Ukuhambelana kweAries kunye nePisces
Olu phawu lomlilo kunye nolu phawu lwamanzi ngumdlalo ongenakwenzeka njengoko u-Aries olawulayo engenakho ukwamkela okwexeshana kwaye ngamanye amaxesha yedwa.
Nangona ngamanye amaxesha iiPisces zikulungele ukuthobela iminqweno yeAries la maxesha anqabile kangangokuba awukwazi ukubona imozulu elungileyo ngaphandle kwesiqhwithi.
I-Aries ifuna ukhuseleko kunye nePisces ayisiyiyo eyokuzibophelela ngaphandle kokuba inika ingqwalaselo kunye nothando.
Umfazi waseTaurus ebhedini: Yintoni onokuyilindela nendlela yokwenza uthando
Umfazi waseGemini: Iimpawu eziphambili kuThando, uMsebenzi kunye noBomi
ukungahambelani kobuhlobo kunye ne-libra yobuhlobo
i-taurus eyindoda kunye ne-capricorn yabasetyhini
yintoni uphawu lwama-25 zodiac
Epreli 24 ukuhambelana kweempawu zodiac